Food Delivery Bag ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Food Delivery Bag စက်ရုံ
ကလေးတွေကျောင်းပြန်သွားဖို့အတွက် Polyester နေ့လယ်စာအိတ်
handl နှင့်အတူ Matt polyester နေ့လယ်စာအိတ်နေ့လယ်စာအေးအိတ် ...
ဖက်ရှင်ပုံစံနှင့်အတူ Polyester နေ့လည်စာအိတ်
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Polyester ပတ္တူနေ့လည်စာအိတ်
အတွင်းရှိ Polyester Matt cationic ပတ္တူ trolley အေးအိတ် ...
ဖက်ရှင်ပုံစံနှင့်အတူ polyester ပတ္တူအေးအိတ်
Adj နှင့်အတူ Insulated အိတ်ဆောင် Oxford အထည် Cooler အိတ် ...
နှစ်ထပ်ကုန်းပတ် casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအိတ်
ပစ္စည်းအမှတ်။ : FDB21002
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - Polyester / PEVA နံရံ။ ပစ္စည်းသည် REACH နှင့် Ca 65 test ကိုဖြတ်သန်းလိမ့်မည်။ နံရံသည်အစားအစာနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက် - ၇-၈ နာရီခန့်တွင်အအေးသို့မဟုတ်အပူကိုအအေးသို့မဟုတ်နွေးပါ။ ပြင်ပနှင့်မြှင့်တင်ရေးအဘို့အသင့်လျော်။
ဆိပ်ကမ်း - FOB Xiamen၊ တရုတ်
ပုံစံ: ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းရွေးချယ်နိုင်သည်
MOQ: အရောင်တစ်မျိုးလျှင် 2000pcs
1pc / polybag ထုပ်ပိုး
လက်မှတ် BSCI, FDA, LFGB, REACH, CA65
နမူနာအချိန်7ရက်
အမိန့်အတည်ပြုပြီးနောက် 40 ရက်ခဲအချိန်
ပစ္စည်းအမှတ်။ : FDB21001
ဒီအစားအစာပေးပို့အိတ်သည်လူကြိုက်များသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်ပပစ္စည်းကိုတာတာလင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအလွန်ကြာရှည်ခံသည်။ မြင့်မားသော Density insulator တွင်ပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများသည်ပိုမိုထူထပ်။ ယိုစိမ့်မှုမရှိသောအအေးခံကျောပိုးအိတ်၏ Alu သတ္တုပါးသည်အအေးနှင့်အပူကိုနာရီပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ယိုစိမ့်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။ ရောင်ပြန်ဟပ်စိပ်သည်မှောင်မိုက်တွင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှုတ်ခြင်းဖြင့်ပို့ဆောင်သူအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ အဆိုပါအေးကျောပိုးအိတ်ကွဲပြားခြားနားအခန်းနှစ်ခုသို့လုပ်။ တစ် ဦး အမျိုးမျိုးသောသယ်ဆောင်နိုင်အတွင်းပိုင်း separator ရှိပါတယ်။
ဒီအစားအစာပေးပို့အိတ်သည်အလွန်ရေပန်းစားသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပပစ္စည်းသည် 1680D polyster ဖြစ်ပြီးအလွန်အကြမ်းခံသည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ စီးပွားရေးကတ်ပြားများ၊ အမှာစာလက်မှတ်များ၊ မှတ်စုစာအုပ်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရန်အတွက်ဘေးတိုက်အိတ်ဆောင်များ။ လူမီနီယံသတ္တုပါးနှင့် PE အမြှုပ်အစားအစာများသည်ပူပြင်း။ အေးမြသည်။ ကြိုးများကိုညှိနိုင်သည်။ ဤပစ္စည်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ လိုဂိုသို့မဟုတ်စာသားဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့ဖို့ကြိုဆိုပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာနမူနာကိုသွားအခမဲ့ဖြစ်သည်! ပစ္စည်းအမှတ်: PDB2005 အရွယ်အစား: 34 * 25 * 38cm ဖော်ပြချက်: အစားအစာပေးပို့အိတ် P ...
ပစ္စည်းအမှတ်။ : PDB2002
အရွယ်အစား: 42 * 42 * 48cm
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: တာပေါ်လင် / လူမီနီယမ်သတ္တုပါးနံရံ။ ပစ္စည်းသည် REACH နှင့် Ca 65 test ကိုဖြတ်သန်းလိမ့်မည်။ နံရံသည်အစားအစာနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်သည်။
MOQ: 500pcs အရောင်တစ်မျိုး
ထုံးစံလိုဂိုနှင့်အတူလက္ကားအပူ insulator တွင်လည်းပျော်ပွဲစား casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘော
ကြီးမားသောပျော်ပွဲစား casserole သယ်ဆောင်သူများသည်ကုန်ပစ္စည်းအိတ်များ၊ ကောင်တာများနှင့်အိမ်မှထွက်ခွာစဉ်နေ့စဉ်သုံးရန်ခရီးစဉ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လွယ်ကူသန့်ရှင်းသောအအေးနှင့်အိတ်များသည်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးသင့်အဖွဲ့အစည်း၏နာမည်နှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ လိုဂိုသို့မဟုတ်စာသားဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့ဖို့ကြိုဆိုပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာနမူနာကိုသွားအခမဲ့ဖြစ်သည်! ပစ္စည်းအမှတ်: PDB2008 အရွယ်အစား: 47 * 54 * 20cm ဖော်ပြချက်: ကြီးမားသော Picnic Casserole carrier ...
စိတ်ကြိုက် 1680D ပစ္စည်းပခုံးကြိုးနှင့်အတူ insulated နေ့လယ်စာအေးပေးပို့အိတ်
ဒီအစားအစာပေးပို့အိတ်သည်အလွန်ရေပန်းစားသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပပစ္စည်းသည် 1680D ဖြစ်ပြီး PVC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အလွန်ကြာရှည်ခံသည်။ ရောင်ပြန်ဟပ်ချွတ်သည်မှောင်မိုက်နေသည့်အချိန်တွင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းလက်တောက်ပနေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Food Delivery ကျောပိုးအိတ်သည်စက်ဘီးနှင့်စက်ဘီးဖြင့်လမ်းလျှောက်နေစဉ်သို့မဟုတ်ပို့ဆောင်သောအခါအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကျွမ်းကျင်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အလူမီနီယံသတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပေါ်ယံလွှာသည်အစားအစာကိုအချိန်ကြာရှည်စွာပူစေသည်။ Ev ...
ဒီအစားအစာပေးပို့အိတ်သည်အလွန်ရေပန်းစားသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပပစ္စည်းသည်အလွန်အကြမ်းခံသော Mesh ဖြစ်သည်။ အလူမီနီယံသတ္တုပါးနှင့် PE အမြှုပ်များသည်ပူပြင်း။ အအေးခံသည်။ ကြိုးများသည်ညှိနိုင်သည်။ ဤပစ္စည်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ လိုဂိုသို့မဟုတ်စာသားဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့ဖို့ကြိုဆိုပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာနမူနာကိုသွားအခမဲ့ဖြစ်သည်! ပစ္စည်းအမှတ်: PDB2006 အရွယ်အစား: 44 * 30 * 31cm ဖော်ပြချက်: အစားအစာပေးပို့အိတ်ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ကွက် / လူမီနီယမ်သတ္တုပါးနံရံ။ ပစ္စည်းသည် REACH နှင့် Ca 65 test ကိုဖြတ်သန်းလိမ့်မည်။ တန်းစီအစားအစာဖြစ်လိမ့်မည်
အရည်အသွေးမြင့် 1680D ပစ္စည်းများပုံနှိပ်ထားသောတံဆိပ်ပါသောအပူချိန်နေ့လယ်စာအအေးပေးအိတ်
ဒီအစားအစာပေးပို့အိတ်သည်လူကြိုက်များသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အေးအေးဆေးဆေးကျောပိုးအိတ်သည်လေးလံသော 1680D Polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး High-Density insulation ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းနှင့်ကြာရှည်ခံသည့်အအေးခံကျောပိုးအိတ်၏ alu foil liner ယိုစိမ့်မှုကြောင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အချိုရည်များ / အအေးစားခြင်းနှင့်အအေးလွန်ကဲခြင်းများနှင့်နာရီပေါင်းများစွာနှင့်ယိုစိမ့်မှုကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းနံရံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသန့်ရှင်းရေးအတွက်လွယ်ကူသည်။ ရေစိုခံကျောပိုးအိတ်အအေးများသည်လေးလံသောတာရှည်ခံထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။